"Woza kunye nam!" Uya kuzisola, kodwa uya kuthanda! "Kula magama adumile engumbhali ongaziwayo, yonke into kunye nobomi bokuphila kwanoma yiyiphi na uDon Juan. Kwaye kubo, iminqweno, inxanxanthe, inkqantosi kunye nokoyika, ilizwi layo lithethwa ngumoya wokuzigcina. Kodwa ngubani na oya kuphulaphula xa ekhangelele ngamehlo agcwele umkhwa kunye nesilingo, indoda yamaphupha akho? Emva kwakhe-kude kube sekupheleni kwehlabathi! Nangona kunjalo, kuloo "phesheya yehlabathi" kwakukho umgca, ufana neengqimba. Kwaye wonke umntu kule "ntsimi yeentyatyambo" uyaqiniseka ukuba iyingqayizivele kwaye ayinakwenzeka.
Kwaze kwaba mma ngaliso! UDon Juan wayengumfazi oyithandayo nomfazi osemthethweni. Ngethamsanqa kwakungekho nkonzo! Kodwa ngexesha. Yonke inzala, ebonakalayo, ibonakala ifanelekile ngenxa yenani lentsapho "iSultan" liqhubeka likhula kwaye landa. Njani ukuba? Uyamthanda umyeni wakho, awufuni ukutshabalalisa intsapho yakho, kodwa ayikho amandla okubeka imicimbi yakhe yothando. Ewe, njengoko besithi, ukuba awukwazi ukutshintsha imeko, utshintshe isimo sakho sengqondo, kwaye imeko iya kuguqula ngokwayo. I-femanizer yentsapho, ngokungaqhelekanga, inamanani amaninzi kunamashishini. Kwaye bonke, ukuba bajongwa phantsi kwelungelo, kodwa kungeyona ndlela eqhelekileyo, banceda ukuqinisa intsapho. Ngoko, kutheni uDon Juan engumyeni ongcono?
7 izizathu zokuba kukufanelekile ukugcina ubomi bentsapho kunye nomfazi
UDon Juan uyazi kakuhle iingqondo zesetyhini. Ukusuka kuye awusoze uva ukuba abafazi babi ngeengcamango, kunzima ukuyiqonda, baqikelele kwaye bayonwabe. Unolwazi olunzulu lokuthetha ngesondo elihle kwaye uyazi ukubona izinto ezincinci ezenza sizive zifuna, ziyimfuneko kwaye zinentsingiselo. Ephantse kwindoda elumkileyo yase-Lovelace, le ntokazi iqinisekile ukuba ayinakuphikiswa kwaye iyodwa. Yaye wenza ngokunyanisekileyo! Indoda ehamba ngakwesobunxele, iyazi umqondo kwintlobo yesifazane kwaye inako ukwandisa ukuzithemba, ukukhuthaza nokukhuthaza, ngokungafani namadoda amaninzi athembekileyo avame ukuhlambalaza, ahlazise okanye ahlale engathandanga naluphi na ukubonakaliswa komphefumlo womfazi ongaqondakaliyo.
UDon Juan ungumthandi omkhulu. Indoda enekghono kwisini isisongelo ekuthobeni kwabasetyhini. Kunzima ukumelana nomntu owazi umzimba wakho njengowakhe, kwaye isondo naye unamandla kunokuba umlutha weziyobisi. Ngoko kuvela ukuba intloko ibuhlungu kuphela abo bafazi abangabandakanyekanga kuwo uthando, kodwa benze umsebenzi wokudibanisa. Amanqaku athandekileyo akalalanga ngesondo kwiimali-mboleko, kwaye lowo unelungelo lokwenyelwa nguye, akayi kulibala lo busuku. Umfazi owaziyo ukuthatha isikhundla esilumkileyo akakwazi ukusela kuphela ukususela ngonaphakade kulo mthombo onika ubomi obunomdla, kodwa uyamkhwelisa ukuze abanye bangabi phantsi.
UDon Juan akayena umxhasi weengxelo ezide ezinde. Udlalwa ngothando, kuba lo ngumzimba wakhe, kunye nobudlelwane obunembopheleleko luyimbopheleleko enqanda uthando lokulula kunye noluthando. Ukongezelela, la madoda anesimo esingaphezulu kwemvelo - ukwenza ukuba abafazi banelisekile ngokusemandleni. Kwaye ukuba umfazi oza kuqala iireveli ezinzulu, ngoko kuya kuthatha ixesha elide kwaye ngakumbi ukubeka ingqalelo kubo. Kutheni kufuneka abe negalelo elikhulu ukuba umntu aphile njengenundu - ukusuka kwentyatyambo ukuya kwientyatyambo, ukusuka kwintyatyambo ukuya kwientyatyambo. Ngako oko, umoni ongenamdla akacingi ukuba uhlaselo luya kuba lukhohlakele, kuba elowo kubo lungekho-ngaphandle kothando kuye.
UDon Juan usoloko ekhangele ukubonakala kwakhe. I-Womenizer enegama "elihle" alinakukwazi ukufumana isisu sebhiya, iibhotile ezindala ezingcolileyo kunye nohlobo lwebhedlele elingenayo. Bahlala bebonakala behloniphekile kwaye bekhangeleka. Ukubonakala kwazo kwikhadi lokundwendwela kunoma yimuphi uluntu. Ukuba ngumhlobo wendoda enjalo kunomdla kuba ngokuqhelekileyo uyadala, uthatha indawo yokuphila kwaye unako ukuthabatha nabani kwihlabathi lakhe, kakuhle, okanye nayiphi na into engamnandi, kodwa kukho iibhonasi. Kwindoda enjalo, abafazi baya kwi-trail kunye nomona ("Lucky kuye!") Okanye udibeneyo ("Hayi, ndiya kuba njalo ..."), uzimele, uzimele njengomkakhe. Kodwa kwakukho!
UDon Juan akafaneki kushiya intsapho ngenxa yowesifazane othile. Ukunyaniseka okwenene kwabesifazane kubambelela ngokungqongqo kwintsimbi yesinyithi: "Indoda engumntu oyisiphukuphuku ishintsha abafazi, abathandekayo." Kutheni ukuphosa umfazi owaziyo yonke imikhwa yakhe, iminqweno, iiminqweno, kwaye ngubani oye wambona kwaye uyamthanda ngayo wonke umntu-ogulayo, ecatshukiswayo, kunye nobubi. Lo ngumva wakhe, inqaba, apho uya kuhlala eziva khona ekhaya, ubuyele ngaphandle kwemaski kunye namanxeba angenakuboniswa ngumntu osemzini. Ukuqhawula umtshato kunye nezigqibo zesigqeba, amadoda athile aboneleleyo athambekele ngakumbi, oye wangena kuphela ekukrexeni okukrakra, unokukwazi ukungamthandi, aze aqale ukuqhawula umtshato, abonise ukuhlonipha.
UDon Juan uhlala enengqondo efihliweyo phambi komkakhe. Ubuqhetseba nangona kungabikho boda bendoda, kodwa abayikukukhulula. Ufuna ukuthobela umfazi wakhe, ongenalo ityala lokungabi namandla okulwa nesondo esinamandla. Ngoko ke, emva kokunyuka kwesono, uDon Juan ugijimela ekhaya nge-boutique yezinto zokugcoba okanye isitorethi somlo. Inxephezelo yokuziphatha iyahluka, kodwa ihlala ifanelekile kwaye ihambelana nokukwazi kwayo imali. Wonke umntu uyavuya, kunye nomyeni onobuqili, oye wamgxeka inceba yakhe yothando, kunye nomfazi osisilumko ovumela "abathembekileyo" ukuba babone umona umntu ukuba acele izipho.
UDon Juan usekwa kwimeko yomfazi ohlambulukileyo. Ubomi bonke bukaDon Juan luyintetho, kwaye umfazi ngumhlobiso wakhe oyintloko. Akakwazi ukukwazi ukuba yimpuphu egciniweyo, ekhangelwe ngokugqithiseleyo ngabantu abanjalo, uluntu luya kuthi: "Ewe, wayenalo! Akumangalisi ukuba ukhangele ngakwesobunxele! "Umfazi wesigxina kufuneka abonakale engcono kunazo zonke iintombi zakhe ezidibeneyo. Kwaye oku kukukhuthaza ukuba uzithande, unakekele kwaye unakekele. I-salon ze-Beauty, iinkqubo ze-SPA, amaziko enempilo, iivenkile zefashini kunye neendawo zokungcebeleka eziqhelekileyo ngumsebenzi ongcwele womfazi we-Lovelace. Yaye apho ufumana khona yonke imali yale nto, umfazi okhaliphile sele esazi.
Kukho ukungahambi kuDon Juan - akayi kuze kube yinto epheleleyo kuwe. Uhlobo olunjalo lomsindo. Ngako oko, ngaphambi kokuba ujabule ngokusinqoba okukhulu kwizihlwele zabantu abathandanayo kwaye ugijime nayo ukuze ungene kwiofisi ye-registry, cinga kathathu ukuba uya kuba namandla aneleyo, umonde, ukunyaniseka kunye neyayifanelekileyo yobhinqa "ubuyathavu" ukuze ujabule kunye ne-Don Juan engabonakaliyo.
Amagama amantombazana kwikhalenda yecawa
Ukuba umntu wayeka uthando, indlela aziphatha ngayo
Yintoni abantu bayayixabisa kwintombi: iimpawu ezine ongazange uzi
Ubonakala bukhohlisayo: ezi-7 zezona ziphulo ezintle kakhulu
Yintoni esilindeleyo ngo-2018: Izibikezelo ze-7 ezigunyazisiweyo kakhulu
Poplin - yintoni le nto (ukubunjwa kunye nomgangatho)? Yintoni ebhetele kwilinen yelinen: poplin okanye satin?
Risotto nge mifuno
Uhlobo lokubonakala ngexesha lonyaka
Ingaphakathi kwigumbi lomntwana osana olutsha
Imihlobiso eyenziwe ngesandla
Indlela yokucoca isisu sebhiya kumntu
Indlela yokukhawuleza ukuzibeka ngokukhawuleza
Ukukhulelwa kwexesha elide: Indlela yokuGcina kunye neNtsapho ephilileyo
Kiss, inzuzo yezempilo
Cannelloni nge sipinashi
Ice cream ye-lemon